Ahlu-sunna Waljameeca oo maanta sii deysay odayaashii ay shalay gelinkii dambe xirtay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ahlu-sunna Waljameeca oo maanta sii deysay odayaashii ay shalay gelinkii dambe xirtay
Iyadoo gelinkii dambe ee shalay maamulka Ahlu-sunna Waljameeca ee gobolada dhexe ay xabsiga u taxaabeen ku dhawaad 10 oday dhaqameed oo ka mid ah dadka deegaanka, ayaa la sheegayaa in maanta lasii daayay.
Odayaashaasi ayaa lagu soo eedeeyay in qeybo ka mid ah gobolka Galgaduud ay kulamo kula qaateen Al-shabaab islamarkaana ay lacag diyo ah kasoo qaateen.
Odayaasha ayaa dhinacooda ku dooday in lacagta diyada ah ay ahayd, mid ay kasoo qaateen qabiil ka mid ah qabiilada wax ka dega gobolka Galgaduud.
Dhinaca kale, sii deynta odayaashaasi ayaa sida la sheegay timid kadib markii wadahadal uu dhex-maray mas’uuliyiinta maamulka gobolada dhexe ee Ahlusunna Waljameeca iyo waxgaradka magaalada Dhuusamareeb.
Warar madax banaan oo aynu heleyno ayaa sheegaya in maamulka Ahlu-sunna Waljameeca ay ka xanaaqeen in labada qabiil ee diyadda kala qaatay ay Al-shabaab garwadeen ka ahayd, islamarkaana ay arrinkaasi keentay in odayaashaasi xabsiga loo taxaabo, inkastoo ay maanta xuriyadooda dib u heleen.